Visa Bali " Journey-Assist Visas mankany Indonezia. Karazana karazana Visas
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Visas mankany Bali
Visa mankany Bali. Karazan'ireo vazaha any Indonezia
Karazan'ireo visa ho an'i Indonezia
Stamp rehefa tonga
Visa rehefa tonga
KITAS (Work Visa)
Stamp amin'ny fahatongavan-tena any Bali, Indonezia
Hatramin'ny taona 2016 dia manan-jo hahazo tombo-kase ny olom-pirenena avy amin'ny firenena 169 raha tonga any Indonezia, izay amidy maimaim-poana. Izy io dia mety mandritra ny 30 andro. Ny hajia toy izany dia tsy azo itarina na ovana. Azo atao ihany ny miala ao Indonesia alohan'ny hifaranan'ny asany, ary rehefa tonga any Indonezia ianao vao mahazo an'io hajia io.
Ny andro fahatongavany sy ny andro hialan'ny vahiny avy any Indonezia dia tafiditra ao anatin'ny 30 andro voalaza. Ho an'ny andro iray hitoerana mihoatra ny vanim-potoana io, misy vahiny iray handoa lamandy 1 tapitrisa dolara (70 dolara). Mety handoa vola ao amin'ny seranam-piaramanidina ny onitra, vita haingana be izany.
Olom-pirenena amin'ny 15 repoblika amerikanina taloha no mahazo ny hajia toy izany. Ny olompirenena israelianina ary ny firenena afrikanina sasany, Azia ary amerikana atsimo dia tsy manan-jo amin'izany.
Tahirin-kevitra ahazoana tombo-kase rehefa tonga (Indonezia. Bali)
Pasipaoro manan-kery 6 volana aorian'ny nahatongavany tany amin'ny faritany Indoneziana.
Tapakila fitsangatsanganana. Tsy takiana foana izy ireo.
Raha misy ahiahy mpiandraikitra ny fifindra-monina fa azo inoana fa mandika ny fitsipiky ny fijanonana tsy misy visa ianao, dia omena alalana hangataka fanamafisana fa ampy vola ianao raha eto Indonesia. Porofon'ny porofo, azonao atao ny maneho azy vola na mandeha any amin'ny ATM iray ary mandray karama eto, izay an-tsoratra ny fifandanjanao amin'ny karatra, na asehoy ny volanao amin'ny telefaona.
Visa rehefa tonga any Bali, Indonezia
Ny vanim-potoana maha-ara-dalàna azy io dia 30 na 7 andro. Na izany aza, mandritra ny 7 andro dia mihatra manokana amin'ny olom-pirenena vitsy an'isa any akaikin'i Indonezia ihany. Ny ambiny dia mandray izany mandritra ny 30 andro.
Mitentina 38 dolara amerikana na 500 rupee any Indonezia.
Ity karazana visa ity dia azo atolotra ho an'ny olom-pirenena lavitra any amin'ny firenena rehetra. Afaka hanitatra 30 andro hafa any amin'ny afovoan-fifindra-monina any Indonesia izy io. Mitentina 35 $ izany. Ny famoahana indray amin'ny karazana visa hafa dia tsy azo atao. Tsy ilaina ny mangataka visa toy izany mialoha. Izy ireo dia manome azy eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Iza no mahazo visa toy izao
Avy amin'ny USSR teo aloha, ny visa toy izany dia navoaka ho an'ny olom-pirenena tsy misy afa-tsy fanjakana 6: ny Federasiona Rosiana, Belarosiana, Litoania, Latvia, Estonia ary Armenia. Ireo olon'ny repoblika sovietika taloha sisa, anisan'izany ny Okrainiana olom-pirenena, dia tsy afaka mamoaka visa rehefa tonga. Ny olom-pirenena israeliana dia tsy maintsy mahazo visa toy izany ao amin'ny Konsulat Indonezianina. Tsy mametaka izany amin'ny pasipaoro izy ireo. Ny Isiraeliana iray no manan-jo ho tonga any Indonezia amin'ny fiaramanidina manokana amin'ny alàlan'i Jakarta, Surabaya na Bali.
Antontan-taratasy takiana amin'ny visa rehefa tonga:
Pasipaoro iray manan-kery mandritra ny 6 volana manomboka amin'ny daty nahatongavany tany amin'ny faritany Indoneziana.
Ny fandoavana ny fe-potoana hatramin'ny 60 andro ho an'ny visa toy izany dia fandikan-dalàna. Ny fanemorana mihoatra ny 60 andro dia efa heloka bevava (heloka bevava) ary iharan'ny sazy goavambe - hatramin'ny 500 tapitrisa ropia (35 500 $), na fanagadrana aza (hatramin'ny 5 taona).
Fahasamihafana eo amin'ny visa amin'ny fahatongavany sy ny hajia amin'ny fahatongavany (Bali)
Ho fanampin'ny zava-misy fa ny visa amin'ny fahatongavany dia omena any amin'ny firenena vitsy kokoa noho ny hajia amin'ny fahatongavany, ny visa amin'ny fahatongavany dia AZO havaozina nefa tsy handao ny firenena. 35 $ ​​ny fanavaozana USA. Ny hajia tsy azo havaozina, ary raha mila mihoatra ny 30 andro ianao dia voatery hiala ny firenena ary miverina raha te hahazo tombo-kase vaovao indray maimaimpoana.
Visa visa mpizaha tany any Bali, Indonezia
Maharitra 30-180 andro. Ho an'ny famolavolana azy dia vidiny $ 50 ny sarany.
Visa iray fizahan-tany dia navoaka any amin'ny masoivoho indonezianina rehetra. Ilaina ihany ny mametraka ny antontan-taratasy mifanentana amin'izany. Matetika ny masoivoho manaiky ny antontan-taratasy amin'ny andro fandraharahana, na izany aza, tokony ho fantarinao mialoha ny fandaharam-potoanan'ny asa ao amin'ny tranokalan'ny masoivoho iray manokana mba hisorohana ny loza.
Tahirin-kevitra ho an'ny visa mpizahatany:
2 sary 3 by 4.
Fangatahana fampiharana (navoaka ao amin'ny masoivoho na alaina ao amin'ny tranokalan'ny masoivoho).
Sarin-tsary momba ny famandrihana tapakila tapakila mandroso.
Saripika momba ny famandrihana hotely.
$ 50 $.
Ilaina ny hanazava ny lisitry ny antontan-taratasim-pahefana ao amin'ny masoivoho manokana, satria any amin'ny firenena maromaro ireo masoivoho ao Indonezia dia mila antontan-taratasy fanampiny, ankoatra ny etsy ambony. Ohatra, ny fanambarana momba ny banky na rakitsary antontan-taratasy manamarina ny fandoavana ilay hotely.
Aorian'ny andefasanao ny antontan-taratasy ilaina dia havoaka aminao ny visa afaka andro vitsivitsy. Manome ny zony hijanona any Indonezia mandritra ny 30-60 andro izy. Ho fanampin'izay, azo ovaina ho visa ara-tsosialy izy io. Amin'ity tranga ity, ny zon'ny hijanona dia avo roa heny - mandritra ny 4 andro isaky ny mandeha. Araka izany, amin'ny totaliny, afaka mijanona ara-dalàna ao Indonezia mandritra ny 30 andro ianao.
Soa azo avy amin'ny mpizahatany Visa
Ny visa ho an'ny mpizara dia tsy takiana amin'ny visa mpizahatany fa tsy maintsy atao mandoa azy io amin'ny visa ara-tsosialy.
Ny tombony amin'ny visa mpizahatany amin'ny visa sosialy dia tsy ilaina ny taratasy fanohanana ahafahana ny voalohany. Na izany aza, tokony ho marihina fa ny mpiasa ao amin'ny masoivoho dia afaka mirakitra an-trano fandraisam-bahiny naorinao araka ny antontan-taratasy narosonao ho mpanohana amin'ny visa. Aorian'io dia mety ho sarotra kokoa ny fanitarana ity visa ity.
Visa sosialy any Bali, Indonezia
Mamoaka ireo masoivoho rehetra any Indonezia izay mipetraka amin'ireo firenena eran'izao tontolo izao. Any Indonezia, ny fahazoana visa sosialy dia tsy azo atao.
Ny taratasy fanohanana izay ahafahanao mangataka an'ity visa ity dia mitentina 250-350 rupees Indoneziana (18-25 dolara). Ny vidin'ny visa ho an'ny fisoratana anarana dia mazàna $ 50.
Navoahana mandritra ny 60 andro ity visa ity amin'ny raharaha mahazatra. Na izany aza, ny masoivoho dia manana zo handray fanapahan-kevitra hafa momba ny fe-potoana, ohatra, ny famoahana visa visa mandritra ny 30 andro fotsiny. Ny famoahana azy koa dia manondro lisansa visa maharitra 90 andro manomboka amin'ny datin'ny famoahana ny visa, izay tsy maintsy idiranao ao Indonezia. Raha tsy izany, loafaina io visa io.
Raha te-hahazo fahazoan-dàlana toy izao dia takiana amin'ny taratasy fanohanana avy amin'ny olona manana zom-pirenena Indoneziana ka manasa anao hitsidika. Ny teratany toy izany dia mpanohana visa. Ny sponsor amin'ny visa dia handray andraikitra feno aminao mandritra ny fitsidihanao ny firenena. Mba hahazoana an'io visa io manokana any Bali, mila mpanohana iray voasoratra anarana any Bali ianao araka ny antontan-taratasin'ny KTP. Fikambanana ara-dalàna (orinasa) dia mety miasa toy ny mpanohana ihany koa.
Tahirin-kevitra ho an'ny visa sosialy:
Ny fonosana antontan-taratasy ho an'ny visa sosialy dia mety ho hafa kely ary miankina amin'ny masoivoho manokana. Amin'ny tranga be dia be, mila:
2 sary 3,5 hatramin'ny 4,5.
Sarin'ilay pasipaoro (misy ny pejy lehibe sy ny pejy misy mari-tombo miditra amin'ny firenena izay fangatahana visa).
Ny pasipaoro mihitsy (ny maha-ara-dalàna ny tokony ho 6 volana farafahakeliny rehefa tonga tany Indonezia).
Sarin'ny taratasin'ny mpanohana (KTP).
Tapakila ho tonga any amin'ny firenena izay namoahana ny visa.
Tapakila ho tonga any Indonezia.
Tapakila iray hiainga avy any Indonezia rehefa vita ny visa.
Banky taratasy manaporofo ny fisian'ny vola takiana.
Ny antontan-taratasy 2 farany dia tsy voatery omena foana.
Visa visa any Bali, Indonezia
Azo amboarina any amin'ny masoivoho Indoneziana any amin'ny firenena rehetra. Any Indonezia izany dia tsy mivoaka izany.
Rehefa mampihatra dia mila mandoa 220-300 dolara amin'ny masoivoho visa ianao, miampy 115 dolara eo ho eo ny vidin'ny marimaritra iraisana.
Ity visa ity dia tsy manome karama amin'ny fiasana sy manakarama olona.
6-12 volana ny vanim-potoana mety. Ny masoandro dia mamaritra ny daty farany amin'ny tranga manokana.
Ity visa ity dia mety ho an'ireo izay mitsidika an'i Indonezia dia fandraharahana, nefa tsy manondro asa, ny fampiasana ny mpiasa ananan'ny olona, ​​ary ny tanjon'ny fitsidihana dia: fifampiraharahana, fifanarahana fifanarahana, seminera, fitadiavana mpiara-miombon'antoka, fihaonambe, mametraka ny fanondranana entana, fanaraha-maso ny fampiasam-bola.
Karazan-tany fitsidihana any Indonezia
Ny fahazoan-dàlana amin'ny raharaham-barotra dia mety ho fidirana tokana sy fidirana marobe (code 211 ary 212, tsirairay). Ity farany dia manome alàlana ny handao an'i Indonezia mandritra ny faharetan'ny visa araka ny ilaina. Na izany aza, farafahakeliny indray mandeha isaky ny 60 andro, na ahoana na ahoana, dia mila miala ianao, satria ny fotoana izay tsy mitsahatra mitohy amin'ny faritany Indoneziana dia tsy tokony hihoatra ny 60 andro.
Ny olom-pirenena avy amin'ny fanjakana rehetra dia manana zo hahazo visa visa. Mitaky taratasy navoakan'ny orinasa iray voasoratra any Indonezia izany. Tokony hanasa anao amin'ny orinasa iray manokana ity orinasa ity. Ary handray anjara amin'ny maha mpanohana visa izy, dia tompon'andraikitra feno aminao mandritra ny fitsidihanao any Indonezia.
Ny fahazoan-dàlana visa iray dia tsy azo aitarina na ampidirina amin'ny karazana visa hafa.
Ny orinasa mpanohana manasa dia tsy maintsy manome ireto mpanasa ireto amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto:
Taratasy fanasana izay nosoratany.
Ny sarin'ny SIUP, SKTU, TDP, NPWP, ASA ANDRIAMANITRA.
Kôpikin'ny KTP (ID's director).
Ny taratasinao miaraka amin'ny pirinty.
Raha tsy misy mpanohana dia afaka manome izany ny orinasa visa. Na izany aza, ity, mazava ho azy, dia mihatra amin'ny fiampangana fanampiny. Aorian'ny fitanisan'ny mpanjifa ny masoivoho visa dia hanangona fonosana tahiry avy amin'ny orinasa mpanohana ary handefa fangatahana an'i TELEX (fahazoan-dàlana) any amin'ny birao misahana ny fifindra-monina Indoneziana, izay any Jakarta.
Afaka 20 andro dia hanomanana TELEX amin'ny orinasan'ny visa iray, alefaso ary hanamafy izany. Tsy maintsy vita io fomba io alohan'ny hametrahana antontan-taratasy fonosana amin'ny Konsulat Indonezianina. Noho izany dia ilaina ny mandamina amin'ny visa visa mialoha.
KITAS (Work Visa) any Bali, Indonezia
Ity visa ity dia mety ho an'ireo mikasa ny hiasa amin'ny fomba ofisialy any Indonezia manakarama na hikarakara ny orinasan'izy ireo eto amin'ity firenena ity amin'ny fampiasana karama. Mety koa ho an'izay manambady teratany Indonezianina, ary ho an'ny mpianatra izay mianatra any amin'ny oniversite Indoneziana.
KITAS dia misy amin'ny masoivoho Indonezianina rehetra eran'izao tontolo izao. Any Indonezia, tsy esorina ity visa ity.
Ny vidin'ny fangatahana visa KITAS dia ahitana fandoavam-bola marobe:
Hetra $ 100 isam-bolana dia manan-kery ny visa. Mila mandoa hetra ianao hahazoana fahazoan-dàlana miasa any Indonezia - IMTA.
Ny saram-pandraisana ataon'ny masoivoho visa dia matetika 5,5 tapitrisa ka hatramin'ny 6 tapitrisa rupee (390-430 dolara).
Ny vidin'ny visa amin'ny vola mitentina 105 dolara.
Ho an'ny fahazoana alalana voatery misaraka (EPO) - 1,5-2 tapitrisa rupees (mitovy amin'ny 106-140 dolara; miankina amin'ny faharetan'ny KITAS).
Ilay olona mahazo visa toy izany dia tsy maintsy manome ireto fonosana ireto:
Ny ume ume ume (must must (tokony hosoratana amin'ny teny anglisy).
Ireo antontan-taratasy etsy ambony ireo dia takiana hahazoana ny TELEX ao amin'ny biraon'ny birao misahana ny fifindra-monina Indonezianina.
Avy eo dia mila manatona ny consulat Indonezianina any ivelany miaraka amin'ny TELEX ianao ary fonosana ireto antontan-taratasy manaraka ireto:
Pasipaoro manan-kery mandritra ny 18 volana farafahakeliny nomanina mba hahatongavan'izy ireo tao Indonezia
Ny sarin'ilay pejy main'ilay pasipaoro, ary koa ny fangilohin'ilay pejy misy mari-pamantarana hidirana hiditra ao amin'ny firenena izay fangatahana visa.
Ny isan'ny saram-pizaran'ny visa (105 dolara).
KITAS ao amin'ny kaonsily dia mitaky roa andro farafahakeliny.
Ny marimarina kokoa dia ny VITAS ihany no mivoaka ao amin'ny consulat. Avy eo, efa tany Indonezia, ny masoivoho visa dia mamadika an'io antontan-taratasy io ho ITAS (fahazoan-dàlana maharitra vetivety), ary koa ny MERP (fahazoan-dàlana fidirana sy fahazoana alalana) dia navoaka avy eo ary navoakan'ny KITAS. Ity visa ity dia atao pirinty amin'ny taratasy A4.
Aorian'ny fahataperan'ny fanomezan'ny KITAS dia mila hikatona ity visa ity ianao. Ny fomba fanakatonana dia mitentina 500 ka hatramin'ny 800 rupee (35-60 dolara). Ny vidiny dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fahazoana ny visa.
KITAS Visa Extension
Azo atao ny manitatra ny KITAS amin'ny fotoana araka izay tianao. Mitentina 5,5 tapitrisa rupee (manodidina ny 400 dolara) ny fomba fanitarana.
Raha ny fitsipika, ny visa dia manitatra ny masoivoho visa na ny orinasa manasa. Mba hahafahanao mivezivezy any ivelany imbetsaka mandritra ny KITAS dia mila mamoaka antontan-taratasy misaraka - MERP ianao.
Rehefa nahazo ny KITAS dia namoaka ihany koa ny IMTA (fahazoan-dàlana hampiasa asa any ivelany). Ireo antontan-taratasy 2 ireo dia manome alalana hiasa any Indonezia. Ny tenany manokana ny KITAS raha tsy amin'ny IMTA no manome ny zo miasa eto amin'ity firenena ity.
Karazana Visa KITAS (Work Visa)
Ny karazana KITAS sasany, na izany aza, dia tsy ampidirina ny asan'ny faritany Indoneziana. Izy ireo dia voasariky ny fomba mitovy amin'ny fiasan'ny KITAS miaraka amin'ny IMTA, na izany aza misy ny fihetsehana:
Family KITAS (Family KITAS) - namboarina ho mpikambana ao amin'ny fianakaviana sy ireo vahiny nanambady teratany Indoneziana. Ny vanim-potoana manan-kery dia 5 taona, raha ilaina dia tsy maintsy havaozina isan-taona.
Mpianatra KITAS - misoratra anarana ny mpianatra.
Pension KITAS (Pension KITAS) - navoakan'ny vahiny 55 taona.Raha mahazo izany dia tsy maintsy manome porofo koa ianao fa afaka mivaona ara-bola izy ireo.
Matetika ny visa KITAS voalohany dia avoaka amin'ny teratany vahiny mandritra ny 6 volana, aorian'izany dia ilaina ny hahazoana azy indray. Amin'ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny fahazoana azy fanindroany, dia afaka mahazo KITAS efa herintaona sahady ianao, saingy tsy azo antoka izany.
Ny fanomanana antontan-taratasy fonosana alefa amin'ny CITAS dia maharitra 3 volana.
Airtel (Airtel) - mpandraharaha finday any Sri Lanka
27.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Airtel (Airtel) - mpandraharaha finday any Sri Lanka tsy misy
25.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny AIS One-2-Call - mpandraharaha finday any Thailand tsy misy
Axiata - mpandraharaha finday any Bali
25.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Axiata - mpandraharaha finday any Bali tsy misy
Ranomasin'i Bang Tao
23.10.2019 / Fanehoankevitra 2 eo amin'ny morontsiraka Bang Tao (Bang Tao Beach)
Dialog - Mpikirakira finday an'i Sri Lanka
27.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Dialog (Dialogue) - Mpikirakira finday an'i Sri Lanka tsy misy
27.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Hutch. Etisalat (Etisalat) - mpandraharaha finday any Sri Lanka tsy misy
Indosat - mpandraharaha finday Bali
27.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Mobitel - mpandraharaha finday any Sri Lanka tsy misy
26.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny True Mobile (TrueMove) - mpandraharaha finday any Thailand tsy misy